How'd it happen and more reports?: Singapore Scholarship လျှောက်ထားနိုင်ပြီ
လက်ရှိရွှေလူငယ်လေးတွေ တော်တော်မျာများကို ဒီစကောလာရှစ်လေးတွေ ရထားတာကိုတွေ့ဖူးတယ်.... ဒီအသိထဲက ရွှေလူငယ်တွေဆိုရင် အမေရိကန် စကောလာပါထပ်ရထားသေးတယ်..တချို့ကတော့ အမေရိကကိုတောင် ရောက်သွားကျပြီလေ...
"စင်ကာပူ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဂိုကန်စွီ၏ တက္ကသိုလ်လေးနှစ် ပညာသင်ဆု" မြန်မာကျောင်းသားများ လျောက်ထားနိုင်
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ကြားခွင့်အတွက် ပေးအပ်မည့် ပညာသင်ဆုအား လျှောက်ထားရန် စင်ကာပူသံရုံးက ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။
၂၀၁၅ အတွက် ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာများအား ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ အထိ လက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ ဂိုကန်စွီ ရန်ပုံငွေ ပညာသင်ဆုသည် ၄ နှစ်ကြာ တက်ရောက်ရမည့် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းအတွက် သင်တန်းကြေး၊ စင်ကာပူသို့ လေယာဉ်လက်မှတ်ခနှင့် နေထိုင်စ ရိတ်တို့ ထောက်ပံ့မည်ဖြစ် သည်။ ထိုဆုမှာ စင်ကာပူအား စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာ ရေး ဗဟိုချက်ဖြစ်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် ဒုတိယ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းအား ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
စင်ကာပူဘဏ်များအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲသည့် ပညာသင်ဆုအား အာရှပစိဖိတ် ၁၅ နိုင်ငံမှ ထူးချွန်ကျောင်း သား ၄ ဦးအထိ နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်သည်ဟု ဆိုသည်။
စင်ကာပူ တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် ထိုဆုအား လျှောက် ထားနိုင်သည့် နိုင်ငံများမှာ ဘရူနိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဟောင်ကောင်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျပန်၊ ကိုရီး ယား၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ တရုတ်၊ ထိုဝမ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ လာအိုနှင့် မြန်မာတို့ဖြစ်သည်။ ဆုချီးမြှင့်ခံရသည့် ကျောင်း သားများသည် စင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ် (NUS) ၊ နန်ယန်းနည်းပညာ တက္ကသိုလ် (NTU) ၊ စင်ကာပူစီမံခန့်ခွဲရေးတက္ကသိုလ် (SMU) နှင့် စင်ကာပူ နည်းပညာနှင့် ဒီဇိုင်းတက္ကသိုလ် (SUTD) တို့တွင် ပညာသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ် သည်။
လျှောက်ထားသူကျောင်းသားများသည် ကောင်းမွန်သည့် ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အ သွေးနှင့် ပညာရေးစွမ်းဆောင်မှုများ ရှိထားရန်လိုသည်ဟု စင်ကာပူသံရုံးက ဆိုသည်။ ပညာသင်ဆု ချီးမြှင့်ခံရသူ များသည် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ပြီး ပါက စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီ (သို့) သက်ဆိုင်ရာ မိခင်နိုင်ငံတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော စင်ကာပူ အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုတွင် ၃ နှစ် လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
ii) General Certificate of Education Advanced Level withapass in English and4other 'A' level subjects
The award is based on academic merit and places will be allocated by open competition.
Application for the Singapore Scholarship must be submitted on the prescribed application form (The application form and supporting documents must be of A4 size and printed on one side only). Please contact the Singapore Embassy/ High Commission/Consulate-General in your capital city foracopy of the Singapore Scholarship brochure and application form. You may click here forasoftcopy of the application form for AY2014/2015.
HE Mr Yuok Ngoy
Mobile: (855) 23 724 874
Fax: (855) 23 217 250
Mobile : 0821 1428 1718
Tel: 856-21-212120 or 856-21-216005
Respective schools of the applicants
Ms Karol Travino
You may download the application form for AY2014/2015 here.
A: The Singapore Scholarship covers full tuition fees, living allowance of S$4,300 per annum and accommodation fee based on the room rates at each university during the school semester. One economy class air ticket from scholar's home country to Singapore at the commencement of their undergraduate course and one economy class air ticket from Singapore to their home country upon successful completion of their undergraduate course. No further financial assistance will be provided for other travel expenses as well as any additional expenses/fees incurred during the Overseas' Exchange Programme, Overseas' Attachments or Summer Courses taken up by the scholars with their respective universities.